फेरिएको जोडीको भाषा – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsफेरिएको जोडीको भाषा
फेरिएको जोडीको भाषा
October 24, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – रिल लाइफमा सफल जोडी भन्ने वित्तिकै, ह्यान्डसम हिरो, ब्यूटिफल हिरोइन र उनीहरुलाई मन पराउने दर्शकको संख्यालाई हेरिन्छ । यही आधारमा नेपाली फिल्मको सफल जोडीको मापन गरिएको पनि छ ।
राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धर अभिनय राम्रो गरेर हिट जोडी भएका होइनन् । उनीहरुको स्टाइललाई दर्शकले मन पराएका हुन् ।
आर्यन सिग्देल र नम्रता श्रेष्ठको जोडी पनि उस्तै हो । मेरो एउटा साथी छ भन्दै उनीहरु हिरो हिरोइन पारामा ननाचेको भए मन पराइएको जोडी नभन्न पनि सकिन्थ्यो ।
तर, अहिले नेपाली फिल्मको भाषा फेरिएसँगै जोडीको भाषा पनि विस्तारै बदलिएको छ । अहिले हिट जोडीका लागि डाडाकाडामा नाच्नै पर्दैन । अहिले दर्शक र फिल्मीकर्मीले मन पराएपछि त्यो जोडी हिट हो ।
अभिनेता दयाहाङ राई र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको जोडीलाई नै हेरौ । प्रियंका र दयाहाङका जोडी अहिले त अलग छ । तर, उनीहरुले सिनेमा धेरै खेले । उनीहरु दुबै जनालाई लिएर सिनेमा बनाउन निर्माताले पैसा पनि खर्च गरे । दया र प्रियंकाको जोडीले कहिले पनि कुनै डाँडामा गएर नाचेनन, प्रियंकाको उडिरहेको सारीमा दयाले मुख लगाउँदै माया देखाएनन् । तर, पनि दर्शक यी दुइलाई मनदेखि मन पराउन थाले ।
दया र प्रियंकाको जस्तै जोडी अभिनेता विपिन कार्की र अभिनेत्री बर्षा राउतको छ । हुनत, जात्रा बाहेक यी दुइको अरु सिनेमा रिलिज भएको छैन । तर, बर्षा र विपिनले ३ वटा सिनेमामा काम गरिसकेका छन् ।
गोपि रिलिजको प्रतिक्षामा छ भने जात्रै जात्राको छायांकन सुरु हुँदैछ ।
जात्रामा विपिन र बर्षाले रोमान्स गरेनन् । बरु, श्रीमान् श्रीमति बनेर घर भित्रको समस्यामा अल्झिए, झगडा गरे, माया गरे । तर, पनि यो जोडी रुचाइयो । लगातार ३ वटा सिनेमामा देखिनु यसको उदाहरण हो ।
नेपाली फिल्ममा रिल जोडीको भाषा बदलिदैछ । हिट हुनका लागि सधै नै अंकमाल गरेर मायाको बारीमा पिरतीको फूल फूलाउन आवश्यक छैन भन्ने देखिदै छ ।
नेपाली कलाकारका तस्बिर, समाजलाई असर गर्छ कि बढी सोचिन्छ ?
स्पेनका चार शहरमा ‘छक्का पञ्जा ३’
जय भोले छक्का पन्जा ३ सँग नजुध्दा फाइदा कि घाटा ?
अनमोलको थ्रेट कि हाउगुजी ?
October 7, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अभिनेता अनमोल केसी अहिलेका सर्वाधिक डिमाण्डे कलाकार हुन् भन्ने कुरामा त २ मत रहेन । अनमोल केसीलाई ५० लाख तिर्न निर्माता तयार हुनुले पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । अनमोल केसीलाई हेर्न दर्शक […]
October 8, 2018 Tulasa Karki Celebrity, Entertainment, Gossip, Kollywood, News 0
October 22, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले भेरिफाइड इन्टाग्राम पेजमा अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीकी आमा रविना देशराज जोशीसँग टिका लगाउँदै गरेको तस्बिर पोष्ट गरिन् । त्यसमध्ये यी दुइको एउटा तस्बिरमा धेरैको ध्यान गयो । जहाँ, टिका […]